Madaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay dilkii loo geystay maamulihii DP World ee dekada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandMadaxweynaha Puntland oo ka tacsiyeeyay dilkii loo geystay maamulihii DP World ee dekada Boosaaso
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Dowladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni ayaa ka tacsiyeeyay dilkii loo geystay maamulihii DP World ee dekada Boosaaso Paul Anthony Fermosa.
Shir saxaafadeed uu ku qabtay xarunta madaxtooyada, Madaxweyne Deni ayaa tacsi u diray qoyskii iyo shirkada DP World ee uu ka dhintay Paul.
Deni ayaa sheegay in dilka loo geystay Paul uu yahay mid argagixiso oo ujeedkiisu yahay sidii loo khatar gelin lahaa nolosha dhaqaale iyo sumcada ummmada Puntland.
“Barnaamijkan manta lagu dilay Paul maahan dil loo geystay shakhsi maamula oo keli ah, waa dil loo geystay ummada Puntland, oo loogu talogalay in la baabi’iyo horumarkooda iyo dhaqaalahooda, sumcadooda iyo barnaamijyada ka socda in dalka lagu horumariyo,” ayuu yiri madaxweyne Deni.
Madaxweynaha ayaa wacad ku maray in ay ciqaab la kulmi doonaan cid walba oo ku lug leh arrintan.
“Arrintas baaritaankeeda cid kasta oo lug ku yeelata ama dalka ha joogto ama dibada ha joogto waa dambiilayaal ka galay dambi dadka reer Puntland, cid kasta oo ay ku cadaato arrintaas waxaan ka qaadi doonaa tilaabo sharciga waafaqsan.” Ayuu ku sii daray.
Paul Anthony Fermosa oo u dhashay Talyaaniga ayaa Isniintii saakay waxaa dilay nin baastoolad ku hubeysan meel u dhow dekada.
Ninka dilka geystay ayaa waxaa toogtay ilaalada Paul, sida ay sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan
Wuxuu maamulayay dekeda tan iyo dabayaaqadii 2017, markii DP World ay heshiis la saxiixatay dowladda Puntland si ay u horumariso una maamusho dekedda.
Muqdisho-(Puntland Mirror) Raysulwasaare ku xigeenka dalka Turkiga Veysi Kaynak ayaa maanta oo Axad ah yimid caasimada Soomaaliya ee Muqdisho. Raysulwasaare ku xigeenka ayaa waxaa garoonka diyaaradaha Muqdisho ku qaabilay dhiggiisa Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed iyo [...]